Ny lafiny maizin'ny fiarahamonina maoderina araka ny fahitan'i Morski | Famoronana an-tserasera
Roa taona lasa izay, Pawel Kuckzynsk nitondra antsika ny fijeriny manokana ny fanoharana maromaro mitady fomba fijery hafa izy ireo ny fiantraikan'ny singa sasany amin'ity fiarahamonina maoderina ity toy ny tambajotra sosialy. Waldo lee, etsy ankilany, amin'ity sary ity dia mitady hanolotra antsika fijerena hafa ny dikan'ny Facebook sy ireo sary an-jatony izay mandrafitra ny fisehoantsika eto amin'ity tambajotra sosialy ity.
Raha fintinina, fomba fampisehoana izay mitranga ankehitriny eto amin'ity rafitra ity sy ny fiarahamonina izay mandeha haingana be indraindray, dia izay tsy afaka manome fialan-tsasatra izahay hijanona ary hieritreritra an'izany. Nijanona tokoa ity mpanao sary poloney ity mba hieritreritra lafin-javatra sasany ary taratr'izy ireo amin'ity andian-tsary tsy azo antoka ity izay misy hafatra miafina ao aminy, na dia hita miharihary aza izany dikany izany.
Igor Morski dia nahazo diplaoma avy amin'ny Faculty of Interior and Industrial Design of the Higher School of Fine Arts in Poznan, ary efa niasa nanomboka ny taona 80 sy 90 alohan'ny hianjerany amin'ny sary ho an'ny haino aman-jery. Tamin'ny 1995 dia nanokatra ny studio-ny tenany izy.
Morski dia manazava ny fotoana nandany ny asany tao amin'ny magazine Wprost nitarika azy tsy nahy tamin'ny fomba tsy nampoizina. Nanaiky izy fa nanao asa izay nalaina ara-bakiteny ny ankamaroan'ny fanoharana nataony, toy ny hoe tena nisy ilay naseho tao. Fiara an-tsary niaraka tamin'ny mpanao politika izy ireo.
Ny sary tsirairay izay zarainay mamorona zava-misy kely ianao izay atrehintsika isan'andro ary izay sarotra indraindray ny mandositra. Ohatra iray mazava ny an'ny finday avo lenta finday rehefa mivoaka amin'ny arabe ny olona rehetra toy ny zombie miaraka amin'ny fitaovany mifamatotra amin'ny tanany miaraka amin'ny fijeriny mibanjina azy.
Ianao dia manana ny tranonkalanao y ny facebook-nao hahitana ny asany sisa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary mampiady hevitra eo amin'ny lafiny maizina amin'ny fiarahamonina maoderina